थाहा पाइराख्नुस् : बच्चालाई आमाको दूध कति उमेरसम्म खुवाउने ? - Sudur Khabar
थाहा पाइराख्नुस् : बच्चालाई आमाको दूध कति उमेरसम्म खुवाउने ?
प्रकाशित मिति : ३० जेष्ठ २०७५, बुधबार ०९:०४
सबैलाई थाहा छ, आमाको दूूध बच्चाका लागि अमृत समान हुन्छ। ६महिनासम्म स्तनपान गराउनु आवश्यक मानिन्छ। तर, कति वर्षसम्म स्तनपान गराउने ?